नायिका केकी अधिकारीले भिडियो कल गर्दै रोमान्टिक कुरा गर्ने यि को हुन् ?
Homeसमाचारनायिका केकी अधिकारीले भिडियो कल गर्दै रोमान्टिक कुरा गर्ने यि को हुन् ?
January 18, 2021 admin समाचार 5251
नायिका केकी अधिकारी र क’लाकार ह्यारी योञ्जन अभिनीत ‘आँखा भरी’ म्यूजिक भिडियो सा’र्वजनिक भएको छ ।
गायिका आशा लिम्बू सुहाङको स्व’र रहेको उक्त गीतलाई चन्द्रकला नेवाले लेखेका हुन् । भिडियोको छायांकन बालाजु धर्मस्थली बा’ईपासको क्षेत्रहरुमा गरिएको । भिडियोलाई अहिलेका चर्चित क्या’मरा मेन बुद्ध थापाले कैद गरेका हुन् भने डिरेक्सन दि’नेश माङ्मुको रहेको छ ।
कम्पोस सुनिल विश्वकर्मा, अरे’न्ज टेकेन्द्र यक्सो र एडिट अनिल रानाले गरेका हुन् । सपोर्ट कला’कारको रुपमा रिया लामाले साथ दिएकी छिन् । अब्बल प्रतिभा देखार्ईसकेका कला’कार ह्यारी योञ्जन झन्डै दुईबर्षपछि अभि’नयमा फर्किएका छन् । – ओएस नेपालबाट
राजेन्द्र खड्गीको पुरा परिवार मिडियामा, ‘गुन्डाको छोरी भनेर लभ गर्न डराउँछन् केटाहरु’ (भिडियो हेर्नुहोस्)
आज मिति २०७७ माघ २२ गते बिहीबारको राशिफल हेर्नुहोस्
February 4, 2021 admin समाचार 5165
मेष (चु, चे, चो, ला, लि, लु, ले, लो, अ) आज आतिथी’को रूपमा सम्मान पाउनु हुनेछ । प्रेम, मित्रता र शैक्षिक क्षेत्रमा सफलता मिल्नेछ । आर्थिक पक्ष मज’बुद बन्नेछ । अग्रजको आशिर्वाद प्राप्त होला ।
यस्तो पो जनप्रतिनिधि, ढुक्कसँग पिठ्युँमा बोक्छन् कोरोना सं’क्रमित
June 3, 2021 admin समाचार 2960
खोटाङको दिप्रुङ चुईचुम्मा गाउँ’पालिकाका अध्यक्ष भुपेन्द्र राई दिलो ज्यान दिएर कोरोना संक्र’मितहरुको उद्धार तथा उपचारमा जुटिरहेका छन्। यतिसम्म कि अध्यक्ष राई संक्रमि’तलाई पिठ्युँमै बोकेर आफूले प्रयोग गर्दै आएको गाडी’सम्म लैजान्छन्, गाडीमा राख्छन् अनि आफै गाडी
प्रियंका चोपडाको जन्मदिनमा पाँच लाखको केक
March 16, 2021 admin समाचार 3517
एजेन्सी- बलिउडकी सुन्दरी ना’यिका हुन् प्रियंका चोपडा । केही समय पहिले प्रेमी नि’कसँग बिहे गरेपछि उनी घुम’घाममै व्यस्त छन् । पछिल्लो समय उनी बलिउ’डबाट टाढा जस्तै भएकी छन् । तर पति निकका कारण उनी चर्चामा
सुतेर पनि इम्युनिटी पावर बढाउन सकिने यस्तो छ जन’स्वास्थ्य विज्ञ डा. पाण्डेको सुझाव (223048)
भाण्टा खाँदा हुने १३ फाइदा’हरु (215066)
विवाहित महिलाले किन सिउँदोमा सिन्दुर लगाउँछन् , जान्नुहोस रहस्य.. (214741)
कपालमा चाँया परेर हैरान हुनु`हुन्छ ? यी हुन् चाँया हटाउने घरेलु उपाय… (213032)
सुशान्त केश’ले लियाे नयाँ मोड, रियाको भाइको ‘गोप्य च्याट’ बाहिरियो…हेर्नुहोस् (211914)
छोटो समयमै छिटो कपाल बढाउने तरीका यस्तो छ: थाहा पाहुनुहोस् (210856)
यसरी बनाउनुहाेस्: मात्र केही समयमानै तपाईंको पहेलो दाँत चम्किलो … (209463)
चर्चित हाँस्यकलाकार तथा समाजसेवी धुर्मुसको जन्मदिन आज, कति वर्ष लागे उनी ? थाहा पाउनुहोस् (209362)
प्रहरीले पक्रा’उ गर्न खोजेपछि भिटेनले अचानक यस्तो भने, सबैलाई गरे यस्तो अनुरोध (भिडियो सहित) (178021)